उनको जापान जाने सपना अधुरै रह्यो ? साथीको जन्म दिन मनाउन गएका गणेश मृत अबस्थामा भेटिए !
दाङ :जापान जाने योजनामा थिए गणेश पौडेल । हजुरआमा म जापान जान्छु कमाएर ल्याउँछु भन्दै खुसीका कुरा सुनाएका थिए । तर त्यो खुसी दिन नपाउँदै गणेशले यो संसार छोडे ।
साथीको जन्मदिन मनाउन गएका गणेशको रहस्यम निधन भएपछि उनका आमाबुवाको आँखा ओझाएका छैनन् । घटना रहस्यम भन्दै नि’ष्पक्ष छा’न’वि’नको माग राखेका छन् । त्यो भन्दा साना सबै जापान गए मेरो नाती पनि विवाह गर्ने योजनामा थियो । जापान गएर पैसा कमाउँछु भन्थ्यो हजुरआमाले रुँदै भनिन् ।
दाङ घोराही वजारमा रहेको फ्रेस एण्ड फेमिलि होटलमा करिब दुई दर्जन साथीहरु जन्मदिन मनाउन भेला भएका थिए । मंसिर १५ गते गणेशका साथी नविनको जन्मदिन सोही होटलमा मनाइएको थियो । जन्मदिन मनाएपछि उनीहरु त्यो रात होटलमै बसे ।
तर विहान करिब ४ वजे गणेश कोठामा प’ल्टिएका थिए । साथीहरुले र क्सीको नशा छुटाउन भन्दै साथीहरुले पानीले भिजाएका थिए । तर टा’उ\_को’मा चो’ट देखिएपछि परिवारका सदस्यले घटना रहस्यमय भनेका छन् ।
होटल मालिकले उनी लडेर चोट लागेको हुनसक्ने बताए । तर गणेशलाई चो’ट लाग्दा किन परिवारलाई खबर गरिएन, उनका बुवाको प्रश्न छ ? यति धेरै घ’ट’ना भइसक्दा गणेशका परिवारलाई खबर समेत गरिएन ।
अर्को दिन दिउसो २ वजे परिवारका सदस्य खोज्दै जाँदा गणेश कोठामा फेला परे । उनी वे’होस अवस्थामा फेला परेका थिए । स्थानिय अस्पताल हुँदै भैरहवा मेडिकल कलेजमा रेफर गरियो । तर अस्पताल नपुर्याउँदै उनको मृ’त्यु भयो ।
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार १२:३४ 1 Minute 194 Views